‘दवाबमा महिला हिंसाका घटना ढाकछोप र मिलापत्र’ - चौतारीपोष्ट अनलाईन
‘दवाबमा महिला हिंसाका घटना ढाकछोप र मिलापत्र’
महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटना नियन्त्रणका लागि वर्षेनी अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अहिले पनि हरेक स्थानीय तहमा महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । तर, राजनीतिक दलकै दवाबमा महिला हिंसाका घटना ढाकछोप र मिलापत्र हुने गरेको अधिकारकर्मी स्वयम् बताउँदै आएका छन् । सचेत र शिक्षित नागरिकको बसोबास रहेको जिल्लाका रुपमा लिइन्छ झापालाई । तर, प्रशासनमा पर्ने उजुरीलाई मात्र आधार मान्दा पनि प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ । यसै सन्दर्भमा जन–संसद्ले अधिवक्ता, महिला अधिकारकर्मी तथा महिला नेतृहरुसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
पछिल्लोसमय महिला हिंसाका घटना बढेको देखिन्छ । तर, पहिलेकोभन्दा बढेको नभई, उजुरी गर्ने चेतनामा वृद्धि भएका कारण झापामा घटना सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । झापाजस्तो सचेत जिल्लामा पनि अत्यन्तै निन्दनीय घटना समेत भएका छन् । परम्परागत कु–संस्कार र सामन्ती सोचका कारण पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् । बोक्सीको आरोपदेखि बलात्कार र घरेलु हिंसा झापामा बढ्दै गएको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने चेतना फैलाउने १६ दिने अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । तर, झापामा हिंसामा परेका महिलाहरुलाई राजनीतिक दलकै दवावमा मिलापत्र गराउने र घटना ढाकछोप गराउने चलन बढेको छ । त्यसलाई न्यूनिकरण गराउन यो अभियानले भूमिका खेल्नेछ । हामीले पटक–पटक दलहरुसँग बसेर कुरा गरेका छौं तर, अहिलेसम्म त्यो भन्ने र गर्ने काम भिन्दा–भिन्दै देखिएको छ । एकजना दलका नेताले नै बलात्कार प्रयासको घटना मिलाएको कुरा आफंैले सार्वजनिक स्थानमा बोलेको कुरा मिडियामा समेत आएको छ । यसलाई कसरी लिनु ? जबसम्म राजनीति सङ्लो हुँदैन, यस्ता घटना भइनै रहन्छन् ।
पहिलेको भन्दा अहिले उजुरी गर्ने चलन बढेको छ । वडा कार्यालयदेखि नगरमा समेत मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुनु स्वयम् महिलामा चेतना वृद्धि हुनु र महिलामा आत्मविश्वास बढ्नुलाई झापामा सबल रुपमा लिन सकिन्छ । तर, हिंसाको बढ्दो आँकडालाई हेर्दा करिब ४५ प्रतिशत घटना महिला हिंसाका रहेको पाइएको छ ।
सर्वप्रथम त कानुन कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोग हुन जरुरी छ । विपन्न वर्गका पीडितहरुलाई निःशुल्क न्यायिक उपचार दिनुपर्छ । जसका लागि हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेका छांै । साथै, राजनीतिक आडमा यस्ता कार्य मेलमिलापमा दबाव दिनेलाई पहिले कारवाही हुनुपर्छ । अनि मात्र हिंसा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । जसका लागि जनचेतना पनि पहिलो प्राथमिकता हो ।
अध्यक्षः सञ्जिवनी महिला विकास संस्था, धुलाबारी
समाज महिला हिंसाले आक्रान्त हँुदै गएको छ । घरबाट निस्किएका छोरी, चेली बेलुका सुरक्षित तरिकाले घर फर्कन पाउने हुन् की होईनन,् उनीहरु घर नफर्किएसम्म बुवा–आमालाई चिन्ता हुने गरेको छ । अबको समय प्रत्येक परिवारमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी संस्कार र आचरणको शिक्षा दिनु आवश्यक छ । यदि छोरा मान्छे सभ्य र अनुशासित भए बलात्कार र महिला हिंसाका घटना स्वत कम भएर जान्छ । परिवारमा श्रीमान्–श्रीमतीबीचको बेमेल, कमजोर आर्थिक अवस्था, महिलाहरु आत्मनिर्भर नहुनुलगायत विभिन्न कारणले समाजमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको छ । योसँगै यौवन अवस्थामा बालबालिकामा हुने मानसिक विचलन, लागुऔषध दुव्र्यशन तथा असुरक्षित वैदेशिक रोजगारले हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ । मिठो खाने राम्रो लाउने प्रलोभनमा परेर अशिक्षित र आर्थिक अभाव झेलेका महिलाहरु दलालहरुको फन्दामा परेर हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् । आज हरेक व्यक्ति सचेत हुन आवश्यक छ । हामी यस किसिमको हिंसालाई रोक्न सञ्जिवनी महिला विकास संस्थाको तर्फबाट १६ दिने अभियानमा जुटेका छांै । यो अभियान १६ दिन मात्र होईन, १२ महिना गर्नुपर्न अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा बालिका बलात्कृत हुने क्रम बढ्दो छ भने युवा–युवती लागु औषध दुव्र्यशनको शिकार बनिरहेका छन् । हामी सामूहिक रुपमा घरदैलोमा पुगेर सचेतना जगाउने काम गरिरहेका छांै ।यस अभियानमा सामुदायिक प्रहरीलाई समेत सहभागी गराएका छौं । १६ दिने अभियानको अन्तिम दिन औपचारिक रुपमा बृहत् कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छांै ।
अध्यक्षःमानव अधिकारका लागि एकल महिला, झापा
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान भद्रपुरमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । यो अभियानमा भद्रपुरका १२ वटा संस्थाहरुले विभिन्न क्रियाकलापहरु गरिरहेका छन् । भद्रपुर नगरपालिका अगाडि लेखनाथ चोक, वीपी चोक, भानु चोक, भद्रपुर १ को आदर्श स्कूललगायत विभिन्न स्थानमा दिप प्रज्ज्वलन गरी अभियानको सुरुवात गरेका छौं । प्रत्येक चोक–चोकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानका बारेमा जनचेतनामूलक व्यानर राखेर मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गरिरहेका संस्थाहरुले भद्रपुरको मेचीपुल छेउमा स्थानीयवासीहरुबीच अन्र्तक्रिया गरेका छौं । त्यस्तै, विभिन्न टोलमा पनि चेतनामूलक स्टिकर टाँस्ने घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने, भद्रपुर ७ मा १९ गते बृहत् घरदैलो कार्यक्रम गर्दैछौं, जसमा बालबालिकालाई समेत जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं । हामीले विभिन्न किसिमका अभियानहरु चलाएपनि हिंसा न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । स–साना विषयलाई लिएर समेत श्रीमान् श्रीमतीबीच घर–घरमा झै–झगडा हुँदा सम्बन्ध विच्छेद नै हुने गरेका उदाहरण छन् । मानव बेचबिखनका विषय पनि जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा भद्रपुरमा केही संस्थाहरु सीमानामै बसेर काम गरिरहेका छन् । मानव बेचबिखनमा भद्रपुर भन्सार र प्रहरीबाट विषेश निगरानी भएको छ र, मानव अधिकारका लागि एकल महिलाले पनि सो अभियानमा सहकार्य गरेको छ । पछिल्लोसमय पुरुष पनि महिलाबाट हिंसामा परेका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसको समाधानका लागि महिला र पुरुषबीचको लैंगिक विभेदको अन्त्य आवश्यक छ । त्यसका लागि सचेतनामूलक अभियानको खाँचो छ ।
राधा प्रधान कार्की
संस्थापक अध्यक्षः महिला जनचेतना केन्द्र, काँकरभिट्टा
पछिल्लोसमय महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको महसुस गरेको छु । महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटना न्यूनिकरण गर्न र रोक्न समय–समयमा महिला अधिकारवादी, नागरिक समाज समाजका अभियन्ताहरुले आवाज बुलन्द गर्दै समाजमा सचेतना जगाउँदै आएका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान हो । यस अवधिमा महिलामा हुने विभिन्न किसिमका हिंसा, एचआईभि÷एड्स, हराएका बालबालिकाहरुको सम्झना र मानव अधिकारका बारेमा सचेतना जगाउँदै समाजमा हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । युवा जनशक्ति लागुऔषध दुव्र्यशनको शिकार बन्दै गएका छन् । समाजमा असल संस्कार हराउँदै गएकाले यस किसिमका हिंसा बढ्ने गरेको हो । अवोध बालिका बलात्कृत हुने घटना देशव्यापी बनेको छ । त्यसैले, महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । महिला जनचेतना केन्द्र र मखमली महिला सहकारी संंस्थाले संयुक्त रुपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दे आएको छ । आउँदो २१ गते बृहत् रुपमा अन्र्तक्रिया, चित्रकला प्रतियोगिता र चेतनामुलक नाटक प्रस्तुत गर्ने तयारीमा समेत हामी जुटेका छौं ।
Prevपछिल्लो मतपरिणाम अपडेट– कहाँ कसले जिते ?
Nextउपनिर्वाचन परिणामले भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गर्‍यो : रवीन्द्र मिश्र